» Horjooge C/Qadir”Qofkii u sacbiyo Faroole Diinta ayuu ka baxay+Dhagayso.
Lukas Podolski oo wadadiisa ay tahay Juventus
Taliyaha Sirdoonka Kenya oo la magacaabay & kenyatta oo amaanay
Dowladda Iiraan oo ku hanjabtay inay Alshabaab si dadban ula dagaalami doonto (Maxay Sameynayaan)
Arimo ka jira Bakool iyo Gedo oo lasoo qiimeeyay
XOG:- Cali Maxamed Geedi oo noqonaya Madaxweyne cusub
Horjooge C/Qadir”Qofkii u sacbiyo Faroole Diinta ayuu ka baxay+Dhagayso.
Dec 11, 2012 - jawaab	Sheekh C/qaadir Muumin oo ah Horjooge dhanka borobogaandada u qaabilsan Argagixisada AL Qaacida ee somalia isla markaasna ku sugan gudaba Puntland ayaa waraysi uu siiyay warbaahin AL Shababka leeyihiin kaga hadlay arrimo badan oo ku aadan Puntland iyo qorshaha ay ka leeyihiin AL Shabab.
Ninkaan C/qaadir Muumin oo sanadihii dhawaa warbaahin ka jeedinayay hadalo kulul ayaa Sheegay in Al Shabab ay u dhaqaaqeen Puntland isla markasna ay la dagalamayaan maamulka uu hogaaminaayo Faroole oo uu ku eedeyay inuu kaniisado ka dhisaayo gobolka Puntland isla markaasna xasbiyo sidoo kale ay ka hirgalinayaan oo lagu xero sida uu sheegay dadka Muslimiinta.
Wuxuu sheegay qofkii u sacbiso C/raxmaan Faroole hogaamiyaha Puntland ay diinta ka baxayso.
HALKAAN KA DHAGAYSO CODKA SH.C/QAADIR MUUMIN.
Halkaan ka dhagayso Codka Horjooge Cabdu qaadir muumin
« Warbixinta Ka HoreysayCiidamada sida Gaarka ah u tababaran Alfa Group oo Howlgalo dad iyo Mino lagu so qabtay maanta ka sameyay Jowhar.	Warbixinta Xigto »Madaxweynaha Mali oo ku dhaawaqay Ra’iisul wasaare cusub	Leave a Reply Cancel reply